Madaxweyen Qoor Qoor oo xabsi dhigay odayaal Reer Galmudug ah | Dayniile.com
Home Warkii Madaxweyen Qoor Qoor oo xabsi dhigay odayaal Reer Galmudug ah
Madaxweyen Qoor Qoor oo xabsi dhigay odayaal Reer Galmudug ah
Ciidamada ammaanka Galmudug ayaa xalay magaalada Dhuusomareeb ku xiray qaar ka mid ah odayaal shir ku yeeshay magaalada, sida ay ay ilo-wareedyo lagu kalsoon yahay u xaqiijiyeen shabakadda dayniile.
Odayaasha la xiray oo gaaraya illaa 9 ayaa shirkooda uga hadlay xiisadda ka dhex-oogan maamulka Galmudug iyo kooxda Ahlu-Sunna, ayaga oo soo jeediyey in wada-hadal lagu dhameeyo, oo aan dagaal loo adeegsan.
Odayaasha ayaa la geeyey saldhigga booliska magaalada Dhuusomareeb, sida ay noo sheegeen saraakiil ciidan.
Sababta odayaasha loo xiray ayaa lagu sheegay inay tahay soo jeedintooda ku saabsan wada-hadallo lala galo, taasi oo madaxweynaha Galmudug Axmed Qoor Qoor uu kasoo horjeedo.
Axmed Qoor Qoor ayaa la sheegay inay ka go’an tahay inuu dagaal ku qaado magaalada Guriceel oo ay haystaan Ahlu-Sunna, wuxuuna wada-hadal lala galo kooxdaas shuruud uga dhigay inay marka hore soo wareejiyaan gacan ku haynta magaalada.
Dagaalka uu Qoor Qoor doonayo inuu ku qaado Ahlu-Sunna ayaa horey u sababay inuu is-casilo wasiirkii amniga Galmudug Axmed Macallin Fiqi, oo ku gacan seeray dagaal loo adeegsado kooxda, kuna baaqay wada-hadal.
Dhinaca kale, wakiilo ka tirsan beesha caalamka, oo wada-hadallo la yeesha Qoor Qoor Isniintii, ayaa ugu baaqay inuu ka fogaado dagaal cusub oo ka qarxa Galmudug, kaasi oo keeni kara in doorashada golaha shacabka ay dib usoo dhacdo.
Hase yeeshee, sida muuqata Qoor Qoor ayaa waxaa ka go’an dagaal, waxaana toddobaadyadii tegay Muqdisho laga qaaday ciidan ka caawiya dagaalkaas.
Previous articleGalmudug oo ka hadashay xiisada Guriceel iyo Duulaanka ay ku yihiin Ahlusunna
Next articleWaa maxay Farqiga u dhaxeeya Bisayl Siyaasadeed & Quus siyaasadeed?
Wasaaradda waxbarashada oo joojisay lacag Maamulka G/Banaadir ka qaadayay Macalimiinta
axmed shiikh - November 8, 2021 0
Wasaaradda Waxbarasha Hidaha iyo Tacliinta Sare ee Xukuumadda xilgaarsiinta ayaa go’aamo ka soo saartay cabashooyin kaga yimid hay’adaha Waxbarashada Gobolka Banaadir, iyada la baabi’iyay...
Dowlada Turkiga oo hub iyo Diyaarado ka iibinaysa dalka Itoobiya...
Dagaalo ka dhacay degaano ka tirsan Jubbada Hoose
Maxay tahay xuquuqda ugu dambeysa ee la siiyo dadka xukunka dilka...
GOLAHA WASIIRADA PUNTLAND OO ANSIXIYAY MIISAANIYAD SANADEEDKA 2022
Askarigii dilay George Floyd oo racfaan ka qaatay xukunkii hore loogu...
Qaar ka mid ah Ciidamadii ku dhaawacmay dagaalkii Bohol ee Duleedka...
Khasaaro ka dhashay is rasaaseyn ka dhacday Guriceel
Wasiirka Caafimaadka JFS oo ka qayb gashay xaflad lagu daahfurayay dib...
axmed shiikh - October 17, 2021 0